သွားချေးတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော အစွမ်းထက်နည်းလမ်း (6) ခု – Myanmar Magazine
October 22, 2018 myanmarmagazine	ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ
2. ပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝသွားတိုက်ဆေး ရဖို့အတွက်ဆိုရင် –
• မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ခွက်တစ်ဝက်
• ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
• သံပုရာဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
နောက်တစ်နည်းကတော့ နှမ်းလက်တစ်ဆုပ်ကို မိနစ်အတော်ကြာ ဝါးပြီးနောက် ထွေးထုတ်ခြင်းဖြင့် သွားတွေကို သန့်စင်စေပြီး သွားကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ကျန်နေတဲ့နှမ်းတွေကို သွားပွတ်တံအခြောက်နဲ့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွားမှာ အရောင်စွဲနေရင်လည်း ဒီနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
5. သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကြိတ်ချေထားတဲ့ သွားတိုက်ဆေးကလည်း သွားကြေးမတက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းမြန်ဆန်တဲ့ နည်းတစ်ခုပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ လိမ္မော်သီးတွေကို အတူကြိတ်ချေပြီး သွားပေါ်မှာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။5မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေဆေးပါ။ ဒီနည်းက ခံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သေစေပြီး ခံတွင်းနံ့ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဒါက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ပေမယ့် သွားတွေကို ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ သန့်စင်စေနိုင်တဲ့ 100% သဘာဝနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
• ရှာလကာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဆား စားပွဲတင် ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ရေ ၄ အောင်စ
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောကာ သွားကို တိုက်ပေးပြီး ရေဆေးချပါ။ ရက်အတော်ကြာ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမြင့်မားဆုံးသော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
← ကလေးထိန်းမယ့် ရွှေထူး မရှိလို့ အမေကိုထမင်းခွံ့ကျွေးခိုင်းနေတဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
ဟိန်းဝေယံ မင်းသမီးတစ်ဦးနဲ့ ကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ် ပြောပြလာတဲ့ ညီမဖြစ်သူ စွဲညို့ရှင် →
September 20, 2018 myanmarmagazine Comments Off on အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ အတွက် လဲလူရွက်
November 23, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ရုံးပတီသီး ကို အစိမ်းတို့စားရတာ ကြိုက်ရင် ဒီစာလေးကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးပါ